Ukuhanjiswa kweentyatyambo kumaziko asemthethweni ngogqithiso lwebhanki eMoscow | Intlawulo evela kwiakhawunti yokuhlawula umbutho
Ukuhanjiswa kweentyatyambo kumaziko asemthethweni ngokudluliselwa kwebhanki eMoscow.
Ufuna uku-odola iintyatyambo njengeziko elisemthethweni. umntu ohlawule kwiakhawunti yebhanki eMoscow?
Uku-odola ngokudluliselwa kwebhanki kulula!
Ungathanda uku-odola iintyatyambo ngoku? - khetha nje i-bouquet for Floristum.ru eMoscow, nakwiphepha loku-odola, khetha indlela yokuhlawula "engekho imali kumashishini asemthethweni", gcwalisa iinkcukacha kwaye isivumelwano siya kuthunyelwa kwangoko kwiposi yakho kwaye kuya kukhutshwa i-invoice.
Ngaba ukhetha ukugqiba isivumelwano kwangaphambili kwaye u-odole iintyatyambo kwangaphambili? - nceda usibhalele malunga neenjongo zakho: inkampani.floristum.ru/en okanye tsalela umnxeba: 8 800 600-54-97.
Uluhlu lwee-bouquets ngamaxabiso athiwe thaca kwisiza anikezelwa eluntwini intengiso yentengiso yeentyatyambo ukulungiselela amaziko asemthethweni.
Izibonelelo zokusebenza kunye Floristum.ru eMoscow ukulungiselela amaziko asemthethweni
(Isibonelelo sentengiso seentyatyambo ngokuhanjiswa):
I-Bouquets ihambisa imihla ngemihla eMoscow nakwesiphi na isixeko saseRussia phantsi kwesivumelwano esinye.
Emva kokugqitywa kwekhontrakthi enye, unoku-odola iintyatyambo kunye nezipho kuso nasiphi na isixeko saseRashiya apho iFloristum.ru isebenza khona, kwaye ezi ziindawo zokuhlala ezininzi apho kuhlala khona abathengi kunye noogxa bakho!
Intlawulo yeentyatyambo ezivela kwiakhawunti yebhanki yombutho.
Inkqubo elula yokuzenzekelayo ye-invoice evela kwi-LLC "FLN" (iFloristum.ru) kwiinkcukacha zeziko lakho elisemthethweni, ngohlobo loku-odola isipha. Akukho mfuneko yokuba ubhale naphina, ufowune kwaye uxolele umthetho oyilwayo, inkqubo iya kukhupha i-invoyisi kwidilesi ye-imeyile oyichazileyo.
Amawaka ama-bouquets atholakalayo Intsimbi.ru EMoscow!
Ukuhanjiswa kwe-odolo kuso nasiphi na isixeko eRashiya! Into oyifunayo kukuchaza isixeko, ukhethe isipha esifanelekileyo seentyatyambo kwaye ucacise iiparameter zokuhambisa.
Ixabiso eliphantsi le-bouquets.
I-Floristum.ru sisibonelelo apho iivenkile zeentyatyambo kunye neenkampani ezithengisa izinto ezininzi zibonelela ngee-bouquets zabo zobungcali kunye nokwenziwa. Xa uthenga apha, unokuqiniseka ukuba uya kufumana isipha esikhulu esivela kubaqeqeshi ngexabiso elinomtsalane.
Isivumelwano esinye soku-odola kumawaka eivenkile zeentyatyambo.
Ngokuqukumbela isivumelwano esinye, ufumana ithuba lokuthenga iintyatyambo kumawaka amahlanu. I-portal inokhetho olukhulu kakhulu lwee bouquets kuyo yonke incasa. Khawufane ucinge - ngaphezulu kwekhulu lamawaka. Kwaye ungazithenga ngokucofa kabini. Kufuneka ufake iinkcukacha zakho ngendlela elula, kwaye kwixesha elizayo baya kongezwa kwifom yoku-odola ngokuzenzekelayo.
Ukukhuselwa kubuqhetseba kunye neenkonzo ezisemgangathweni.
Xa u-odola kwaye uhlawulela iinkonzo nge-Intanethi, akukho nzima ukuwela kumaqhinga abakhohlisi kunye nokuchitha imali yakho, okanye uthenge nje inkonzo esemgangathweni. Indawo yaseFloristum.ru inenkqubo yokhuselo lwabathengi. Kude kube kugqitywe iodolo yakho, intyatyambo ayizukuyifumana imali. Oku kuqinisekisa umgangatho womsebenzi owenziweyo, ukhuseleko lwendawo yokuhlala kunye nesiqinisekiso se-100% sokubuyiselwa kwemali kumthengi.
Amaxwebhu okuvala ngaphandle kobunzima.
Enye inzuzo kukuba amaxwebhu okuvala isivumelwano athunyelwa kwi-akhawunti yakho ngokuzenzekelayo ngaphandle kwezikhumbuzo. Ulibale ukuqokelela iirisithi, izikeni, iingxelo zokuthenga. Ngoku, ufumana imvelaphi kwidilesi yakho yokuthumela kunye nokuskena kwi-imeyile yakho. Ilula kwaye ilula kakhulu!
Akukho zindleko zongezelelweyo xa sihlawula kwiakhawunti yangoku.
Amaxabiso eentyatyambo ayafana nawabantu. abantu:
Alstroemeria - 17 iiPC.
Ngama-12592 Букет "Всплеск эмоций"
I-11 ezimhlophe, iiroses zase-Ecuadorian ezimhlophe.
I-Ruscus - ii-10 iiPC.
Bush chrysanthemum - ii-10 iiPC.
Isipho esisebenzayo. Isitayile kwaye ingaqhelekanga ngemibala eqaqambileyo. Isipho esinjalo siya kubonisa isimo sakho sokufudumala kubantu obathandayo, kubantu obathandayo. Inganikwa njengesipho kumbhiyozo, kwaye njengokuncoma, nanjengophawu lokuqwalaselwa.
Ngama-9232 Ibhokisi emangalisayo
I-bouquets ezincinci. Ukwakhiwa: i-orchid, i-eustoma, i-chrysanthemum, i-rose, i-alstrameria, i-eucalyptus, i-bush rose
Ngama-2400 Isipha senombolo 240
I-chrysanthemum enentloko enye-ii-11 ii-pcs.
I-sweet and gentle hello ekwindla - isipha se-chrysanthemums emhlophe nepinki. Ndwendwela utitshala wakho wokuqala, mnike ingqalelo yakho kwaye wenze umnqweno ongabalulekanga kwimpilo kunye nokuphila ixesha elide.
Ngama-6057 Заветная мечта
I-bouquets enesitayile kunye ne-gypsophila.
Ngama-6950 Isipha senombolo 12
Bona zonke ii-bouquets ezinamaxabiso asezantsi